WF(J) Series Plate Freezer with Refrigeration Unit-Plate Freezer-Square Technology Group Co., Ltd.
●The refrigerant can be Freon, Ammonia or CO2 u Mere nke oké osimiri mmiri na-eguzogide Aluminom, nri ọkwa. Ogwe osisi aluminom dị 25mm gbara ọkpụrụkpụ na-enye ike dị elu, nguzogide corrosion na nrụpụta ọkụ. Efere akpadola akpaka ma nwee nrụrụ pere mpe.
●A na-eji otu mpempe akwụkwọ Polyurethane na-eme ka ogige ahụ kpuchie iji hụ na ihe siri ike ma belata nkwụsị oyi site na iwepu nkwonkwo.
●PTFE ehi ehi-free mgbanwe sooks nkwonkwo, flanged ma ọ bụ eri njikọ. A na-ekpuchi eriri ahụ na 304L nchara braid. u Equipped with built-in Germany BITZER compressor unit.
Size Irè nke nke evaporation efere: 2020 × 1252 (mm)